कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला !
पाँच जनाको समूहले घरबाट आहारासमेत ल्याउने गरेका छन् । चन्दले विगत १५ वर्षदेखि आफूले सञ्चालन गरेको चिया पसलमा समेत भुस्याहा कुकुरलाई आहारा दिएर पालनपोषण गर्दै आउनुभएको छ । “खाद्यान्न सहज आपूर्ति नहुँदा मान्छेलाई नै राहत दिनुपर्ने स्थिति भएका बेला छाडा पशुचौपायालाई बचाउन कसैको ध्यान पुगेन”, चन्दले भन्नुभयो, “दैनिक एक क्विन्टल जति खाद्यान्न आहाराका रुपमा दिँदै आएका छौँ ।”
भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले गरे संसदमा यस्तो घोषणा ! कार्यकर्ता देखि सर्वसाधारणमा खुसि !
स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने व्यापारिक फर्मलाई कारबाही